Hambalyo iyo talo ku socota Meyerka degmada Baki iyo ku xigeenkiisa. | Awdalpress.com
Hambalyo iyo talo ku socota Meyerka degmada Baki iyo ku xigeenkiisa.
Waxa Daabacay staff-reporter on Dec 25th, 2012 and filed under Daily Somali News, Editorial. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Walaalayaal aniga oo ku hadlaya magaca qurba joogga degmada Baki ee ku kala baahsan daafaha dunida, waxa aan ugu horreyn idiin hambalyeynaynaa sida fiican ee ay doorashadu idiinku dhacday, sida fiican ee intii la doortay iyo inta aan soo bixiniba isku garabsanaysaan, sida midnimada leh ee aad ugu foojigan tihiin danta guud ee degmada. Intaasi oo wada guul ah ayaan awalan idiinku hambalyeynaynaa. Waxanan idin leenahay Ilaahay ha idiin fududeeyo xika aad qabateen, waxa kale oo aan idiin rajaynayaa in aad taariikh cusub dhigi doontaan. Annaguna haddii aan qurba joogga Degmada nahay waxa aan ku dadaali doonnaa in aan garab iyo gaashaan idiin noqonno. Oo aan weliba dhinacyada horumarka iyo xidhiidhka beesha caalamka aan culays saarno.
Walaalayaal, waxan ognahay in aynaan muddo dheer waxba ka qaban degaankeennan, waxba u qaban dadkeenna,taasi oo ay ugu wacnayd sababo badan, oo ay ka mid tahay ammaan darro iyo rafaadkii dagaalladii sokeeye ay innagaga tegeen. Waxan ognahay in dadkeennu u harraaddan yahay waxbarasho tayo leh, caafimaad iyo adeegyada bushada oo dhan, Si ay u helaan intaasi oo dhanna ma dhici karto in aan mar kaliya ay innoo wada fusho, amma ay wakhti gaaban innoogu fusho. Taasina waxa ay u baahan tahay samir. Laakiin haddii aan dadaallo waxa aan qabsan karnaa wax badan oo sannaddo lagu qabto.
Sida uu sheegay Meyarka cusub ee degmada Baki Mudane Maxamed Aw Ahmed Caateeye ( Marooro ), waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo degaanka la xaafinayo, oo dhug yeesho dhawaqa noocaasi ah, loo sameeyo qorshayaal baaxad leh. In la sugo amniga degaannada. Si arrimahaa loo gaadhana waa in qorshayaasha ugu horreeya ee golaha degaanku iskugu imanayaan ahaadaa kuwo si cilmiyeysan oo dawladaysan u dajiyaan habkii iyo qorshihii loo wajihi lahaa.
Walaalayaal dalkeennu waa qani, waa meelaha la isugu iman doono, ee khayraadka leh, waa meelaha nolosha mujtamacyada dunida laga dabbari doono. Waxana dhulkeennu leeyahay khayraad dabiici ah, beero, xoolo iyo biyo. Sidaasi daraaddeed, waa in aad niyadda ku haysaan in aad habeen iyo dharaarba u soo jeeddaan, guusha maantuna yey noqon mid gaajadeeda loo samri waayo. Walaalayaal intiinna maanta dhulka joogtaa ee weliba talada haysaa waa in aad taasi garataan. Sida ummadaha caalamka waa in aan jiilasha dambe u fekerraa, oo ay innaga dhaxlaan dhul iyo khayraadkiisii oo is barkan. Oo aan laga sheeganayn amma looga qabiil sheeganayn. Waxad ogaataan oo aad niyadda ku haysaan in da’yar waxbaratay amma wax u barandootaa ay dhulka mulkiyi doonto, waa haddii ay og yihiin in ay dal leeyihiin. Da’yartaasi amma dalka ha joogeen amma qurbahaba ha joogeene.
Walaalayaal, waxa idinka horreysa hawl baaxad leh, u baahan dhaqaale iyo kaalmo dawladeed. Waxa iyana garab looga baahan yahay bulshada degaanka iyo qurba joogayaga u heellan dhulkooda. Waxa loo baahan yahay wacyi gelin, baraarujin iyo dadaal dheeraad ah oo aan ahayn uun xoog. Tusaale ahaan waxa jira dhul la seeraystay oo dhul-daaqsimeed ahaa, haddii ay ahaan lahayd buuro iyo bannaanba, markaa maaha in xoog lagu muquuniyo, balse waa in si sharci dawladeed ah loo wajahaa.
Walaalayaal, daryeelka bulshadeenna iyo dhulkeennu waa lama huraan, Ilaahay ayaanan tawakalaynaa. Guusha maanta innoo soo hoyatayna yey noqon mid aan ku faanno kaliya. Balse waa in ay noqotaa mid waxtar u leh ummadda degmada, caddaaladduna waa ta kaliya ee ummadda lagu dhaqo. Dulmi qaata idinma lihin, dhulkiinna dad siiya idinma lihin, laakiin sharciga aad dhigataan waa in uu shaqeeyaa, sidaasi ayaan caddaaladda uga jeednaa.
Walaalayaal, haddii aad tihiin xildhibaannada talada degmada Baki maanta gacanta ku qabtay, gaar ahaan Meyerka iyo Meeyar xigeenka oo shaqadoodu ay 24 saacadood noqonayso, waxan idin leenahay amma idinkula talinaynaa:
Iskaashi la sameeya aqoon yahankiinna, siyaasigiinna, ganacsatadiinna iyo waxgaradkiinna. Bulshada xubin xubin ula shira, qof qof ula tashada. Kuna guula talo urursan iyo qorshe ku dhigan warqad.
Waxa aad ogaataan in ay hareerihiinna buuxaan aqoon yahanno iyo waxgarad idin taakulayn kara. Una dhabar adayga talooyinka iyo doodaha.
Wada shaqayntiinnu waa muhiim. Khilaaf dhexdiinna yimaaddaana waa bur bur iyo in aad ku saaqiddaan hawsha idin hortaalla.
Iska ilaaliya danaysi shakhsi, iyo xoolo booliya oo aad carruurtiinna uga dhex raadisaan danta caam. Ogaada marka aad danta caam hagaajisaan in tiinna gaarna ay hagaagtay.
Bulshooyinka idinla jaarka ah, raadiya walaaltinnimadooda, marti-gashiiya, oo xidhiidh fiican la yeesha.
Iska ilaaliya cadawga idin kala xadi doona, idin laaluushi doona, idinku danaysan doona. Masiirkiinna weecin doona, ee isaga kiin dhigaya walaal, nasteex amma in uu wax idiin qabanayo.
Intaa maanta aan ku soo gaba gabayno talo iyo tusaale wixii aan dan moodnay. Guusha aad soo hoyseenna waan idiin hambalyeynaynaa.
Afhayeenka Qurba joogga Degmada Baki/Dilla.
This post has been viewed 6038 times.